Shina namboarina vita amin'ny orinasa mpamatsy akora sy mpamatsy akora mpamatsy kalitao vita amin'ny kalitao Shina Hoyer
Sticks diffuser Stefaner Rosiana kalitao avo indrindra
Kalitao avo lenta: ny zozorozo vita amin'ny zozoro dia vita amin'ny rattan avo lenta, pervy, hazavana, ary hazavana matevina ary ny fikarakarana ny maina dia hihazona azy io ho maina sy azo ampiasaina amin'ny toe-javatra samihafa.
Aromaterapy tapa-bolo: ampiasaina amin'ny fanoloana ny volotara DIY, mety amin'ny milina diffuser, menaka manan-danja, fofona manitra na hanitra ankasitrahana, dia manampy amin'ny famoronana rivo-piainana voajanahary sy miala sasatra amin'ny asa fividianana sy reraka. tsirairayhazo kely volotara manana gony kely handrindrana fofona tsara na menaka.
Fametrahana ny fonosana fiarovana: mazàna 100pcs voafetra ao anaty kitapo iray, nefa afaka manome koa ny fitakiana fonosana manokana aminao izahay, afaka mandamina araka ny fitakianao ianao. Ny halavan'ny volotara dia 25cm (10 santimetatra) ny halavany ary 3 mm ny savaivony, izay hita ho toy ny fenitra sy fenitra mety indrindra ampiasaina amin'ny tavoahangy diffuser.
Ampiasaina betsaka: Ny setan'ny volotara volotaramanampy amin'ny famoahana ny fofona eo amin'ny rivotra. Azonao atao ny mandinika ny habaka toy ny efitrano fandraisam-bahiny, lakozia, birao, efitrano fisasana ary toerana hafa amin'ny alàlan'ny fofona manitrao.
Mora ampiasaina: apetaho eo am-bavany ny tavoara volafotsy mba hahatonga azy ireo ho lena, avy eo ny fofona na ny menaka, ary hoentina miampita ireo hazo ireo rehefa mandeha ny fotoana.
Size Lava 25cm, Diameter 3mm Lava 10 santimetatra, Diameter 3mm
Color White, mainty loko namboarina azo ekena ihany koa
Previous: Zavamaniry varahina mainty vita amin'ny laoniny ho an'ny setrin'ny menaka diffuser
Manaraka: Tavoahangy ronono miloko 16oz